June 30, 2021 Nan Da Articles 0
ဒီညဟာ မကျဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတို့ရဲ့ စာခြုပျ အဆုံးသတျနစှေဲ့တဈခု…
မနကျဖနျဟာ လှတျလပျခွငျးတှနေဲ့ နရေ့ကျအစ
လီယှနျနယျမကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာမှာ ၂၀၀၁ ဇနျနဝါရီ ၈ ရကျမှစ၍ (၇၄၇၈) ရကျကွာကစားလာခဲ့ပွီး အသငျးမှာ နှဈ (၂၀) ကြျောကွာကစားခဲ့သူပါ။
ဒီညဟာ သူ့နဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတို့ကွားမှာ သဘောတူညီမှုစာခြုပျပွီးဆုံးမယျ့နေ့ ဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာရဲ့ ဥက်ကဌ ပွနျဖွဈလာတဲ့ လာပျေါတာရဲ့ ညှိနှိုငျးမှုကွောငျ့ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးထပျတိုးနိုငျတယျလို့ သတငျးတှထှေကျနခေဲ့ပမေယျ့
အခုအခြိနျအထိတော့ တရားဝငျ လကျမှတျရေးထိုးမှုတှေ မလုပျခဲ့သေးပါဘူး။
ဘာစီလိုနာအသငျးဘကျကတော့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားကို လကျလှတျလိုခွငျးမရှိသေးပဲ မကျဆီနဲ့ စာခြုပျ အသဈတဖနျထပျမံပွုလုပျရနျမြှျောလငျ့နပေါတယျ။
ဘာစီလိုနာပရိသတျတှကေလညျး မကျဆီကို အသငျးမှာဆကျရှိနစေလေိုတာကွောငျ့ ဘယျလို ဆကျဖွဈလာမဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရ ဦးမှာပါ။
ဒီညမှာသာ စာခြုပျသကျတမျးမတိုးဖွဈခဲ့တော့ဘူးဆိုရငျတော့ မကျဆီဟာ နှဈ (၂၀) ကြျောကာလတှငျးမှာပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈစာခြုပျလကျမဲ့ဖွဈလာတော့ မှာပါ။
မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့ နောကျဆုံးအကွိမျစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တာက၂၀၁၇ခုနှဈ၊နိုဝငျဘာလတုနျးကဖွဈပါတယျ။
မကျဆီဟာ၂၀၀၁ခုနှဈ၊ မတျလ၆ရကျနကေ့ ဘာစီလိုနာကစားသမား အဖွဈ တရားဝငျဖွဈလာခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ၂၀၀၅ခုနှဈ၊ ဇှနျလမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပရျောဖကျရှငျနယျစာခြုပျခြုပျကို ဆိုခဲ့ပါတယျ။
စပိနျသတငျးစာ Marca က မကျဆီရဲ့စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးမယျ့အခွအေနကေို “Messi:Tonight Is Free”ဆိုတဲ့ခေါငျးစညျးနဲ့
အားကစား သတငျးစာရှဖေုံ့းမှာ ဖျောပွလာသလို AS သတငျးစာကလညျး ” Messi Day”ဆိုပွီးဖျောပွထားပါတယျ။
ဒီညဟာ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ …. စာခြုပျသာမခြုပျဆိုဖွဈခဲ့ရငျ မနကျဖနျမှာ ဘာစီလိုနာဘကျက မကျဆီရဲ့အပွောငျးအရှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဘာမှသကျဆိုငျတော့မှာမဟုတျပါဘူး။
မနှဈကလို မနျစီးတီးနဲ့ပွောငျးရှမှေု့နောကျဆုံးအဆငျ့မှာ ဝငျရောကျပါဝငျခဲ့သလိုအခှငျ့အရေးတှမေရှိနိုငျတော့သလို တဈစုံတဈရာ တားဆီးမှုတှလေုပျနိုငျတော့မှာမဟုတျပါဘူး။
မကျဆီက လညျး မညျသညျ့ကလပျနှငျ့မဆိုလှတျလပျစှာဆှေးနှေးပွောငျးရှခှေ့ငျ့ရရှိသှားပါပွီ။ မကျဆီက သူခဈြခငျနှဈသကျတဲ့ အသငျးနဲ့ နှဈ (၂၀)ကြျောကွာ နှောငျးကွိုးတှကေ
စာခြုပျ တဈစောငျ ပျေါကနစှေဲ့မှာ အဆုံးသတျပွီးခြိနျမှာ ဘယျတေါဆကျဖွဈလာမလဲ…ဆကျလကျ လကျတှဲသှားမလား…၊ လမျးခှဲခြိနျရောကျပွီလားဆိုတာ မကွာခငျသိရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
မက်ဆီ Day… ဒီညဟာ မက်ဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ စာချုပ် အဆုံးသတ်နေ့စွဲတစ်ခု…
မနက်ဖန်ဟာ လွတ်လပ်ခြင်းတွေနဲ့ နေ့ရက်အစ
လီယွန်နယ်မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာမှာ ၂၀၀၁ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှစ၍ (၇၄၇၈) ရက်ကြာကစားလာခဲ့ပြီး အသင်းမှာ နှစ် (၂၀) ကျော်ကြာကစားခဲ့သူပါ။ ဒီညဟာ သူ့နဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ကြားမှာ သဘောတူညီမှုစာချုပ်ပြီးဆုံးမယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာရဲ့ ဥက္ကဌ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ လာပေါ်တာရဲ့ ညှိနှိုင်းမှုကြောင့် အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေ မလုပ်ခဲ့သေးပါဘူး။ ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားကို လက်လွှတ်လိုခြင်းမရှိသေးပဲ မက်ဆီနဲ့ စာချုပ် အသစ်တဖန်ထပ်မံပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေကလည်း မက်ဆီကို အသင်းမှာဆက်ရှိနေစေလိုတာကြောင့် ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာမဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရ ဦးမှာပါ။ ဒီညမှာသာ စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးဖြစ်ခဲ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ မက်ဆီဟာ နှစ် (၂၀) ကျော်ကာလတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စာချုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာတော့ မှာပါ။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာက၂၀၁၇ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလတုန်းကဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ မတ်လ၆ရက်နေ့က ဘာစီလိုနာကစားသမား အဖြစ် တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ချုပ်ကို ဆိုခဲ့ပါတယ်။
စပိန်သတင်းစာ Marca က မက်ဆီရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့်အခြေအနေကို “Messi:Tonight Is Free”ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ အားကစား သတင်းစာရှေ့ဖုံးမှာ ဖော်ပြလာသလို AS သတင်းစာကလည်း ” Messi Day”ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီညဟာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ …. စာချုပ်သာမချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ရင် မနက်ဖန်မှာ ဘာစီလိုနာဘက်က မက်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှသက်ဆိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မနှစ်ကလို မန်စီးတီးနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့သလိုအခွင့်အရေးတွေမရှိနိုင်တော့သလို တစ်စုံတစ်ရာ တားဆီးမှုတွေလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မက်ဆီက လည်း မည်သည့်ကလပ်နှင့်မဆိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိသွားပါပြီ။ မက်ဆီက သူချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ အသင်းနဲ့ နှစ် (၂၀)ကျော်ကြာ နှောင်းကြိုးတွေက စာချုပ် တစ်စောင် ပေါ်ကနေ့စွဲမှာ အဆုံးသတ်ပြီးချိန်မှာ ဘယ်တေါဆက်ဖြစ်လာမလဲ…ဆက်လက် လက်တွဲသွားမလား…၊ လမ်းခွဲချိန်ရောက်ပြီလားဆိုတာ မကြာခင်သိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။